November 21, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Soomaaliya November 21, 2019
Muqdisho (SONNA)-Bayaan ka soo baxay wasaarada Xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa xukuumada federaalka Soomaaliya ayaa looga hadlay dadaalka ay dowladu galisay joojinta Jarida iyo dhoofinta dhuxusha. Bayaankaan oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa u qornaa sidaan:- ￼ War saxaafadeedkan waxa uu ku saabsanyahay arrimo ahmiyad wayn u leh shacabka soomaaliyeed iyo horumarinta Sii akhriso
Ethiopia: Field coordinator (M/F) – Jigjiga
Shaqooyinka November 21, 2019
Organization: Médecins du Monde Country: Ethiopia Closing date: 17 Feb 2020 For more than 35 years, Médecins du Monde (MdM), a campaigning medical organisation committed to international solidarity, has been caring for the most vulnerable populations at home and abroad. It has continued to highlight obstacles that exist in accessing health care and has secured […]Sii akhriso
Cayaaraha November 21, 2019
(Manchester) 21 Nof 2019. Weeraryahanka kooxda Manchester United ee Marcus Rashford ayaa shaaca ka qaaday inay ka mid noqdaan afarta ugu sareysa horyaalka Premier League inaysan ku filneyn, isagoo xusay inuu doonayo inuu koobab ku guuleysto xilli ciyaareedkan. Manchester United ayaa xilli ciyaareedkan ka maqan tartanka Champions League, kaddib markii ay kaga dhameysteen Sii akhriso
(Muqdisho) 21 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa ku guuleysatay galabta koobka xiisaha badan ee General Daa’uud kaddib markii ay 3-2 ugu adkaatay naadiga Muqdisho City Club. Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan qeybtii koowad ayaa lagu kala maray 2-0 ay ku horkaceyso kooxda Horseed, waxaana goolasha u dhaliyay xiddigaha kala ah […]Sii akhriso
(Barcelona) 21 Nof 2019. Daafaca reer Spain ee Gerard Pique ayaan meesha ka saarin suurtogalnimada uu Neymar Jr dib ugu soo laaban karo kooxda Barcelona xilliyada soo socda. 27 jirkan reer Brazil ayaa shaaca ka qaaday suuqii xagaaga ee la soo dhaafay rabitaankiisa ah inuu ka tago kooxda Paris St Germain, si uu ugu laabto Barcelona. […]Sii akhriso
(London) 21 Nof 2019. Daafaca reer Spain ahna kabtanka kooxda Chelsea ee César Azpilicueta, ayaa ka hadlay fikirkiisa kaga aadan in Jose Mourinho loo magacaabay macalinka cusub ee kooxda Tottenham Hotspur, kaddib wareysi uu dhawaan bixiyay. Subaxnimadii Arbacada, kooxda Tottenham Hotspur ayaa ku dhawaaqday in Jose Mourinho uu yahay macallinka cusub ee Spurs-ka, isagoo Sii akhriso
Madaxweyne Farmaajo oo Warqadaha Agoonsiga ka Guddoomay Danjiraha Dalka Japan
Muqdisho (SONNA), Nofeembar 21, 2019: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha cusub ee dalka Japan u qaabilsan Soomaaliya. Danjiraha Boqortooyada Japan Mudane Horie Ryoichi ayaa Madaxweynaha la wadaagay farriin iyo salaan uu uga siday Boqorka dalkiisa Boqor Naruhito iyo Ra’iisul Sii akhriso
(Liverpool) 21 Nof 2019. Weeraryahanka kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa ku tilmaamay macalinka reer Germany ee Jurgen Klopp inuu yahay kan ugu fiican adduunka. Jurgen Klopp ayaa ku hoggaamiyay kooxda Liverpool ku guuleysiga tartanka Champions League xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, waxaana xilli ciyaareedkan loo arkaa kooxaha ugu cad cad ee ku guuleysan kara horyaalka Sii akhriso
(Madrid) 21 Nof 2019. Xiddiga kooxda Real Madrid ee Luka Modric ayaa sheegay inay doonayaan ku guuleysiga dhamaan tartamada kala duwan ay qeybta ka yihiin xilli ciyaareedkan, inkastoo ay qaab liita kaga bilaawdeen kulamada horyaalka La Liga iyo tartanka Champions League. Waxaa soo fiicnaaday qaab ciyaareedka kooxda Real Madrid ee kulamadii ugu dambeeyay ay ciyaartay, Sii akhriso
(London) 21 Nof 2019. Goolhaayihii hore kooxaha Chelsea iyo Arsenal ee Petr Čech ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in markale uu Jose Mourinho ku soo laabto shaqada tababarka. Dhinaca kale Goolhaayaha reer Czech ayaa wuxuu tilmaamay in soo laabashada shaqsiyada sida Jose Mourinho oo kale ay tahay dhacdo weyn, sababa la xiriira inuu ka mid […]Sii akhriso